Author Topic: Rekha Thapa (रेखा थापा) Nepali Actress (Read 271587 times)
Re: Rekha Thapa
« Reply #20 on: August 11, 2009, 08:54:11 AM »
jharana bajracharya ta kahan ho kahan sexy....ani intelligent pani..nepali heroin haru ma the most sexy and intelligent..rekha thapa sanga compare nai hunna ho
« Reply #21 on: August 11, 2009, 12:48:44 PM »
« Reply #22 on: August 18, 2009, 01:12:55 PM »
Actress Rekha Thapa inauguratesanew jewelry shop ventured by singer Yash kumar at Maitidevi, Kathmandu on Monday.
(Photo: Sundar Shrestha)
« Reply #23 on: August 18, 2009, 11:57:54 PM »
jharna jhai jhan
ARTIST :- UDIT NARAYAN JHA & DIPA NARAYAN JHA
CAST :- RAJESH HAMAL & REKHA THAPA
Casts: Biraaj Bhatt & Rekha Thapa
Singer: Deepak Limbu
Song - Mero Kalpana Maa
सुनकै चुरा नसके नि (Sunkai Chura Nasake Ni )
Casts: Ramit Dhungana & Rekha Thapa
सुन गाउँ घर
Casts: Nikhil Uprety, Arunima Lamsal, Ramit Dhungana and Rekha Thapa
Musukkai Hasideuna Sutukkai Bolideuna
Casts: Rajesh Hamal & Rekha Thapa
Song - Ma Sundari Bharkhar 16 Nageki
Aaja Man Udera Bhagcha (आज मन उडेर )
« Last Edit: April 03, 2016, 12:42:23 PM by tundikhel »
« Reply #24 on: August 22, 2009, 06:16:20 AM »
Actresses Sushmita KC, Rekha Thapa and Dipashree Niraula (L to R) dance to the tunes of Teej song duringaprogramme organised at Maiti Nepal on Friday.
(Photo: Bikash Rauniyar)
Rekha Thapa - in hot shorts!
« Reply #25 on: August 27, 2009, 01:03:01 PM »
« Reply #26 on: September 18, 2009, 12:00:05 AM »
पदमा पुगेपछि प्रचण्डले पनि ढाँटे : रेखा थापा
बिहिवार, 17 सेप्टेम्बर 2009
म देशको झन्डालाई काँधमा बोकेर हिँड्ने व्यक्ति भएको कारण पार्टीको झन्डामा विश्वास गर्दिन। तर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मलाई मन पर्ने नेता हुन्। उनको आकर्षक व्यक्तित्वले जो कोही पनि सजिलै प्रभावित हुन्छ।
उनको आत्मविश्वास उच्च छ। साधारण किसानको छोरो भएर राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल व्यक्ति हुन्। हँसिला र ह्यान्डसम छन् उनी। चट्ट मिलेको हेयर स्टाइलले गर्दा उनी सबैका आकर्षणको केन्द्रविन्दु भएका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा उनीसित परिचय भएको छैन। तैपनि अघिल्लो वर्ष चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको राष्ट्रिय पुरस्कारमा उनीसित भेट भएको थियो। उनकै हातबाट मैले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको पुरस्कार लिएकी थिएँ। हिजोआज पनि विभिन्न कार्यक्रम र समारोहमा उनीसित भेटघाट भइरहन्छ तर हाम्रो क्षेत्र फरक भएकाले त्यति कुराकानी भने हुँदैन।
उनले ग्रहण गरेको पार्टीगत सिद्धान्तले म प्रभावित छु। मार्क्सवादको सिद्धान्त भएर होला, जनताको हकहितका कुरा धेरै बिकेको छ। १२ वर्ष जंगलको जनयुद्धपछि उनको नेतृत्वमा क्रान्ति आएको हो। जनताको साँचो प्रतिनिधिको रूपमा उनी जम्न सफल पनि भए।
सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न माओवादी पार्टी सफल भयो। राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउनमा उनी र उनको पार्टीको ठूलो भूमिका छ। देशप्रति जिम्मेवार भएका नागरिक पनि हुन्। उनको भाषण प्रेरणादायी छ। उनमा सबैलाई जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने सामर्थ्य छ।
विडम्वना जब जनताले बहुमतले जिताएर उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याए अरू नेता जस्तै उनले पनि जनतालाई ढाँटे। जनतालाई दिएको बाचा सत्तामा पुगेपछि पुरा गरेनन्। अर्कालाई हानि पुर्‍याउने कार्यमा उनको पार्टी बढी तम्सियो। सोझा जनताहरू मारमा परे। कुर्सी र सत्ताको मोहतिर लागेर जनतालाई निराशामात्र दिए।
उनको पार्टीले सरकारमा बस्दा सिद्धान्त अनुसार काम गरेन। उनी माओवादी पार्टीका अभिभावक हुन्। आफ्ना छोराछोरीलाई सम्हाल्न नसक्नु अभिभावकको कमजोरी हो। उनको पार्टीका मान्छेले जे पायो त्यही गरिरहेका छन्।
पछिल्लो दिनमा माओवादीले आफ्नो पार्टी विपरीत सिद्धान्त अपनाएको छ। जसले गर्दा अरू पार्टीका नेताहरूले समेत दुःख भोगिरहेका छन्। त्यसकारण आफ्नो पार्टीले मच्चाएको आतंकलाई निरूत्साहित पार्ने नीति ल्याउन म उनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सुध्रिने मौका अझै भएकोले पार्टीलाई सही दिशातिर दोहोर्‍याउन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
source - nagarik
« Reply #27 on: October 09, 2009, 10:43:20 PM »
रेखाले गरिन् जीवन बीमा
शुक्रवार, 09 अक्टोबर 2009 08:12 नागरिक
सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, असोज २२- 'बचत र सुरक्षाका लागि बीमा गरेकी हुँ,' भर्खरै जीवन बीमा गराएकी चलचित्र अभिनेत्री रेखा थापाले भनिन्, 'आम्दानी बढाउनलाई होइन।'
तीन महिनाअघि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी) मा बीमा गराएकी उनले वार्षिक १ लाख ८५ हजार प्रिमियम तिर्छिन्। चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारले ज्यान जोखिममा राखेर 'स्टन्ट' गर्नु परेपनि दुर्घटना परेमा बीमा नहुने भएकाले आफैले जीवन बीमा गराएको उनले बताइन्। 'दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउन कहिले बन्जी गर्नु पर्छ, अग्लो पर्खालबाट हाम फाल्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'तर दुर्घटना भएमा निर्माताले क्षतिपूर्ति दिँदैनन्, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न बीमा राम्रो विकल्प लाग्यो।'
५० वर्ष उमेर पुगेपछि रेखाले बीमा गराएको रकम फिर्ता पाउँछिन्। उनी अहिले २६ वर्षकी भइन्। '२५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराएकी छु,' रेखाले भनिन्, 'बीमा गरेको अवधि पुरा हुँदा वोनसलगायत अन्य सुविधा सहित ६० लाख रुपैयाँ मेरो हातमा पर्छ।' बार्षिक रुपमा प्रिमियम बापतको रकम घुमघाम र खानपीनमा नै खर्च हुने गरेको बताउँदै उनले सुरक्षाका साथै बचतका लागि त्यो पैसा प्रिमियम तिर्न खर्च गरेको जानका दिइन्। 'त्यसै खर्च हुने पैसा बचत नै हुने भएको छ,' उनले भनिन्।
रेखा मात्र होइन अन्य 'सेलिब्रिटी' कलाकारले पनि अहिले बीमा गराउन थालेका छन्। रेखाका श्रीमान् तथा चलचित्र निर्माता छवि ओझा, राजेश हमाल, अर्जुन श्रेष्ठलगायत धेरै कलाकारले अहिले जीवन बीमा गराएका छन्। सेलिव्रिटी मात्र होइन 'लो प्रोफाइल' का सर्वसाधारणमा पनि बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६३ हजार २ सय ९४ जनाले जीवन बीमा गराएका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो बीमा १ लाख ४५ हजार ३ सय ७ जनाले गराएका थिए। जीवन बीमा गराउने कम्पनीले विक्री गरेको बीमा लेखको वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढी भएको बीमा कम्पनीको नियमन निकाय बीमा समितिले जनाएको छ।
गत वर्ष मान्छेको आम्दानी बढेको तथा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्समा वृद्धि भएकाले बीमा गराउने बढेको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बताए। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यसले सर्वसाधारणको आयमा वृद्धि भएको पुष्टि गर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ३० प्रतिशत नेपाली परिवारले रेमिट्यान्स पाउँदै आएका छन्।
बीमा गराउनेको संख्या कम्पनीको सक्रियताले पनि बढेको हो। प्रतिस्पर्धा बढेपछि बीमा कम्पनी गाउँ-गाउँ जान थालेकाले संख्या बढेको केसीले बताए। उनले कम्पनी संख्या बढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुले एजेन्टको संख्या वढाएर गाउँ(गाउँमा परिचालन गरेकाले बढेको जानकारी दिए। अहिले सबै कम्पनीको गरेर ४० हजारभन्दा बढी बीमा गराउने एजेन्ट कार्यरत छन्। एजेन्टको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यो पहिलेको भन्दा निकै बढी भएको समितिले जनाएको छ।
जिन्दगीको भर नहुने भएकाले बीमाः रेखा थापा
मान्छेको जिन्दगीको भर हुँदैन। कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ। आफ्नो सुरक्षाका लागि बीमा राम्रो विकल्प हो। चलचित्र क्षेत्रमा कसैको पनि बीमा नहुने भएकाले आफ्नो बीमा गराएकी हुँ। बीमा गर्दा सुरक्षा मात्रै होइन बचत पनि हुन्छ। मेरो श्रीमान् छवि जीले पनि बीमा गराउनु भएकाले मैले बीमा गरेकी हुँ।
सुटिङमा 'स्टन्ट' दृश्य दिन जोखिम उठाउनु पर्ने भएकाले दुर्घटना भएपनि आर्थिक समस्या नपरोस् भनेर मैले बीमा गराएकी हुँ। आगोमा 'फाइटिङ' दृश्य दिनुपर्छ, पर्खालबाट हाम फाल्नु पर्छ। त्यस्तो जोखिम उठाउँदा दुर्घटना भएमा मलाई बीमा रकमले आर्थिक सहुलियत पुग्छ। अहिले बीमा गरेर पछि दोब्बर आम्दानी गर्छु भनेर मैले बीमा गराएकी होइन। बीमा गराएपछि केही परे समस्या हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास पनि बढेको छ।
मैले ५० वर्षको उमेरमा बीमा रकम फिर्ता पाउने गरी बीमा गराएकी हुँ। वार्षिक रुपमा १ लाख ८५ हजार प्रिमियम तिर्नुपर्छ। मैले २५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिरेपछि एकमुस्ट ६० लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा गराएकी छु। तीन महिना अघि बीमा गराउँदा सुरुमा मैले दुई लाख रुपैयाँ रकम कम्पनीलाई बुझाएकी थिए। अब प्रिमियम मात्र तिरे पुग्छ।
प्रिमियम बापतको रकम खानपिन र घुमघाममा खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यो रकम बराबरको बीमा गराएर बचत नै भएको छ। पछि केही नभएपनि मैले ६० लाख रुपैयाँ एकमुस्ट पाउँछु। यसले कुनै ठाउँमा लगानी गर्न पुग्छ।
« Reply #28 on: October 12, 2009, 09:27:41 AM »
« Reply #29 on: October 15, 2009, 10:51:58 PM »
सबैभन्दा छोटा लुगा लगाउने नायिका को हुन् ? जवाफ हो, रेखा थापा । उनी आफैँ भन्छिन्, "छोटो स्कर्ट मलाई मनपर्ने ड्रेस हो ।" आकर्षक जीउडाल, पुष्ट शरीर, हिस्सी परेको अनुहार, जति पनि ग्ल्यामरस हुनसक्ने खुबी रेखाको आमपरचिय हो । सायद यही परचियले फ्यान -प्रशंसक)को डफ्फै कमाउन सफल छिन् रेखा । उल्लेख्य त के छ भने उनका फ्यानहरू अनौठो प्रकृतिकाहरू पनि छन् । जस्तो एक वृद्धले उनका लागि गरेको त्याग ।
५० चलचित्रकी नायिका रेखाका लागि देवीदेउता भाक्ने, नियमित इमेल गर्ने, फोन गर्ने आदि काममा सक्रिय ती फ्यान हुन् बीके रसाइली, ८० । सिक्किम निवासी बीकेले पोहोर साल रेखाको नाममा पूजासमेत लगाइदिए रे ! तीन वर्षअघि चलचित्र पि्रयतमाको छायांकनताका रेखालाई देखेर पछि लागेका बीके जीवन रहुञ्जेल उनैको फ्यान रहिरहने बताउँछन् मेलमार्फत । रेखालाई भने बीकेको आनीबानीले कुनै फरक पारेको छैन रे ! भन्छिन्, "फ्यान हुने उहाँको स्वतन्त्रता हो ।"
आफ्ना फ्यानहरूको उमेर समूह १०/११ वर्षका देखि ७५/८० वर्षसम्म रहेको रेखाको अनुभव छ । केटाभन्दा केटी फ्यान बढी भएको पनि उनको आकलन छ । रेखाका अनुसार, अझ टिनएजरहरू हुन् उनका फ्यान । यसपटकको दसँैमा माइत -मोरङ, सलकपुर) गएका बेला ११ वर्ष नकटेकी यात्रा ढकालले उनलाई लामो दौडधुपपछि भेट गर्ने मौका पाइन् । आफूप्रति यात्राको यो क्रेज देखेर रेखा छक्क परनि् । एउटी बच्चीले गरेको चाहनाको यो हद उनले देखेकै थिइनन् ।
लामो समयदेखि धेरै फ्यानहरूको बीचमा रहन सफल छन् हाँस्यकलाकार जोडी मह -मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरविंश आचार्य) । फ्यानसँग जोडिएर उनीहरूको जीवनमा धेरै कथा तयार भएका छन् । जस्तो एउटी विदेशी फ्यानले उनीहरूलाई लगाएको गुन पनि अविस्मरणीय छ ।
अकस्मात् मह जोडीकहाँ एउटी जापानी सुकुमारी यमा मोतो मायुमी हाजिर भइन् फ्यान -प्रशंसक)को नाता लगाउँदै । महको अभिनय र प्रहसनको समीक्षा सुनाउन सक्ने ती युवती खासमा नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमाथि शोधपत्र तयार गर्न नेपाल आएकी थिइन् । तर, महको कलाकारतिाले उनको मन यसरी बदलियो, दुई देश होइन दुई कलाकार -मह) पात्र बने उनको शोधको ।
महको आँखाले के देख्यो ? उनले तयार गरेको यो शीर्षकको शोधपत्र पुस्तकका रूपमा प्रकाशनमा आयो । महका अनुसार, यमा मातो त फ्यान थिइन् नै, पुस्तक प्रकाशित भएपछि धेरै जापानीहरू पनि प्रशंसकका रूपमा भेट्न आइरहेका छन् । डेढ दशकअघिको यो कथा उनीहरूको मस्ितष्कमा अझै ताजा छ । विदेशी भूमिमा महका फ्यान धेरै छन् । यही नाताले उनीहरूले दर्जनौँ देशको भ्रमण गरेका छन् । र, फ्यानका अनगिन्ती कोसेली बोकेर फर्किएका छन् ।
महलाई गौँडा ढुकेर भेट्ने फ्यानहरूको पनि कुनै कमी छैन । मह-सञ्चार -कार्यालय), सुटिङ्स्थल, विभिन्न कार्यक्रमहरू मह भेट्ने सरल उपाय हुन् । फ्यानहरू यही सजिलो बाटो पक्डेर उनीहरूको दर्शनको बन्दोबस्त मिलाउँछन् । अंकमाल गरेर फोटो खिच्छन् । महको अनुभवमा फ्यान हौँ भन्दै आउनेको संख्या दैनिक एक दर्जनभन्दा बढी हुन्छ ।
टेलिफोन र चिट्ठीपत्रको पनि ओइरो लाग्छ महकहाँ । हिजोआज फ्यानहरूले अनौठो र अकल्पनीय अनुरोध गर्न थालेको हरविंश बताउँछन् । भन्छन्, "देश चलाउन र बनाउन अनुरोध गर्नेहरू बढ्न थालेका छन्, जो हाम्रो काम होइन ।" संसारको सबैभन्दा ठूलो कलाकार, आदर्श व्यक्ति, भगवान् आदि महका फ्यानले सम्बोधन गर्ने शब्दावली हुन् । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाहरूसम्म आफ्ना प्रशंसक रहेको उनीहरूको अनुभव छ ।
फ्यानबिनाको कलाकार कोही पनि छैन । तर, नामी कलाकारका फ्यान अजीवका हुन्छन् । जस्तो- सानो पर्दाकी चर्चित नायिका सरतिा लामिछानेका फ्यान । फ्यानमध्येकी पनि बुटवलकी सरस्वती क्षेत्री । पूजाकोठामा देवीहरूका बीचमा सरतिालाई पनि एक देवी मानेर उनले सजाएकी छन् रे ! तीन छोराछोरीकी आमा सरस्वतीलाई सातामा एकपटक फोनबाट सरतिासँग कुरा नगरी निन्द्रै पर्दैन रे ! सरतिा भन्छिन्, "यस प्रकारका भक्तहरू धेरै भेटेकी छु ।" खासगरी मुक्ति र परिचय नामका दुई टेलिचलचित्रमा आदर्श बुहारीको भूमिका निर्वाह गरेपछि सरतिाले प्रशस्त प्रशंसक कमाएकी हुन् । उनीसँग मन छुने अर्को प्रसंग छ । च्यानल नेपाल टेलिभिजनका लागि रपिोर्टिङ् गर्न कालिकास्थान पुगेकी उनलाई अकस्मात् एक जना ८५ वर्षे वृद्धाले खुट्टा पक्डिन् । "नानी ! तपाईंलाई भेट्ने मेरो अन्तिम इच्छा थियो, अब मेरो सास गए पनि फरक पर्दैन ।" वृद्धा बोलिरहिन् । सरतिा भन्छिन्, "त्यसपछि मेरो पनि भक्कानो छुट्यो ।" आखिर यो के हो र केका लागि हो ? उनी आफैँ रनभुल्लमा छिन् । भन्छिन्, "आजसम्म मैले अर्थ लगाउन सकेकी छैन ।" सरतिालाई नियमित फोन गर्ने फ्यान पनि प्रशस्त छन् । केही वर्षअघि एउटा तन्नेरीले सरतिासँग बिहे गर्ने सपना देखेछ । त्यसैले पैसा कमाउने बाटो समात्दै ऊ लाहुर गएछ । दन्त्यकथाको प्रेमीजस्तो लाग्ने त्यो तन्नेरी लाहुरबाट छुट्टीमा स्वदेश फर्किंदा झन्डै बेहोस भएछ । किनभने, उसले त्यतिबेला मात्र सरतिा विवाहित भन्ने थाहा पाएछ पत्रिकामार्फत । अझ श्रीमान् ऋषि लामिछानेसँगै खिचेको फोटै देख्ने मौका पाएछ । त्यसपछि उसले लेखेको अन्तिम पत्र पनि कम रोचक छैन सरतिाको कलाकार जीवनका लागि ।
नेपाली कलाकारहरूमा सबैभन्दा बढी फ्यान कसका होलान् ? यस सम्बन्धमा कसैले आधिकारकि सर्वेक्षण गरहिालेको छैन । तर, कुनै चलचित्रकर्मीलाई यो प्रश्न गर्‍यो भने उसले जवाफ खस्न नपाउँदै भन्नेछ, राजेश हमाल । प्रशंसकको ओइरो लागेको देख्दा यस कुरामा विश्वास गर्ने आधार फेला पार्न सकिन्छ । उनी जहाँ जान्छन्, त्यहाँ उनका प्रशंसकको ठूलो जमघट तयार भइहाल्छ । छायांकनका क्रममा जाँदा निर्माण पक्षले विशेष सजगता अपनाउँछ उनका लागि । राजधानीबाहिरको छायांकनमा त झन् उनी बस्ने होटल नै फरक पारन्िछ । कतिपय युनिटकै कलाकारलाई समेत राजेश बसेको स्थान थाहा हँुदैन । यो सब व्यवस्था गर्नुको कारण हो, प्रशंसकको भीडबाट उनलाई जोगाउनु ।
राजेशका पनि बालबच्चादेखि पाका उमेरसम्मका छन् फ्यान । रगतले लेखेका चिट्ठी पनि धेरै संग्रह गरेर राखेका छन् उनले । अरूसँग बिहे गरे आत्महत्या गर्छु भन्ने फ्यानको संख्या पनि ठूलै छ । उनका नजिकका मित्रहरूका अनुसार, उनीसँग समर्पित हुन आउने महिला फ्यानको संख्या पनि कम छैन । तर, राजेशले फ्यानमाथि फ्यानकै मात्र व्यवहार देखाएको उनका कलाकार फ्यान नायक रमित ढंुगाना बताउँछन् ।
गायनकलाका फ्यान पनि अजीवका छन् । यसबारेमा अनुभवका खात बोकेर बसेका छन्, रामकृष्ण ढकालले । चिट्ठीपत्रको ओइरो त सामान्य कुरा हो, उनका लागि तीजमा व्रत बस्ने पनि धेरै थिए । यसमध्ये कलंकी निवासी एक युवतीले उनका लागि सात वर्ष व्रत बसिन् तीजमा । अहिले युवतीको विवाह भइसकेकाले रामकृष्ण उनको नाम लिने पक्षमा चाहिँ छैनन् तर उनमा गडेको क्रेज सम्झेर ल्याउँदा चाहिँ अझै आफू छक्क पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, "बिहे गर्छु भन्नेहरू सबैभन्दा बढी थिए ।" तीमध्ये रामकृष्णको बिहे भएको थाहा पाएपछि एक युवतीले एउटा पत्रका साथ उनका सबै गीति क्यासेट फिर्ता गरेको घटना पनि रामका लागि बिर्सिनसक्नुको छ ।
चलेका सबैजसो कलाकारका फ्यान धेरै हुने गर्छन् । सम्मान थाप्नैका लागि विदेश जाने कलाकार पनि गन्नलाई औँलाभर िछन् । यो सवालमा गायक राजेशपायल राई अगाडि छन् । रगतको चिट्ठी प्राप्त गर्ने सवालमा पनि उनी अगाडि छन् ।
कलाकारलाई भगवान्कै श्रेणीमा राखेर हेर्ने फ्यानहरू पनि छन् । बरु त्यति गम्भीर लाग्दैनन् कलाकार । उनीहरू फ्यान बढून् भन्ने त चाहना राख्छन् तर त्यस अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्नचाहिँ कन्जुस्याइँ गर्छन् ।